Ungakuthola Kanjani I-SEO Cheat | Martech Zone
Ungakuthola Kanjani ukukhohlisa kwe-SEO
NgoMgqibelo, Januwari 21, 2012 NgeSonto, uJanuwari 22, 2012 Douglas Karr
Ukwenza kahle ngokusesha kuyinkemba esika nhlangothi zombili. Ngenkathi iGoogle ihlinzeka imihlahlandlela kubaphathi bewebhu ukuze basebenzise amasayithi abo futhi basebenzise amagama angukhiye ngempumelelo ukuze batholakale futhi babhaliswe kahle, abanye abantu be-SEO bayazi ukuthi ukuxhaphaza lawo ma-algorithms kungawadubula ngqo phezulu. Abasebenzi be-SEO bangaphansi kwengcindezi enkulu yokugcina izinkampani zabo zibeka kahle, ababonisi be-SEO bangaphansi kakhulu.
Izinkampani kungenzeka zingaboni ukuthi abasebenzi bazo kungenzeka bathatha izindlela ezinqamulelayo. Futhi izinkampani ezitshala imali kubeluleki be-SEO noma ama-ejensi kungenzeka zingazi ngokuphelele ukuthi umxhumanisi uzithola kanjani zikudinga ezikudingayo. Ekuqaleni konyaka odlule, uJC Penney wakufunda kabuhlungu lokhu ngesikhathi i-New York Times ibhala udaba, Izimfihlo Ezingcolile Zokucinga. Umkhuba uyaqhubeka, nokho, ngoba izigxobo ziphakeme kakhulu.
Ungathola nokuthi umncintiswano wakho ukukopela. Kanjani? Empeleni kulula kakhulu.
Uma umeluleki we-SEO noma umsebenzi angikaze ngikucele ukuthi wenze ushintsho kusayithi lakho noma kokuqukethwe kwakho, kunethuba elihle lokuthi basebenza kuphela ngaphandle kwesayithi ukudala okuqukethwe okuxhumanisa emuva kusayithi lakho ngama-backlinks acebile ngegama elingukhiye. I-Google ibeka amasayithi ngokuya ngamangaki amanye amasayithi axhumene nawo. Futhi kusekelwe ekuphathweni kwesiza esixhumanisayo. Uma ukhokhela okuqukethwe okungekho kusayithi, mhlawumbe ukhokhela ama-backlinks futhi ungahle ungakuqapheli.
Bheka isizinda ongasola kuso Vula i-Explorer Site. Faka isizinda bese uchofoza Umbhalo We-Anchor ithebhu. Njengoba uvula imiphumela, bheka isiza ngasinye lapho uya khona usebenzisa amagama angukhiye ukuxhumanisa nesizinda embuzweni. Lapho uqala ukuthola izinkundla ezivulekile, izixhumanisi kumasiginesha wabasebenzisi, namabhulogi angenangqondo… kungenzeka ukuthi usebenza nama-backlink akhokhelwayo.
Uma umeluleki wakho we-SEO eyi- ukubhala nokuhambisa okuqukethwe yenkampani yakho, qiniseka ukuthi uyakwamukela lokho okuqukethwe futhi uthole uhlu lwezindawo lapho bekuthumela khona. Ungavumeli okuqukethwe kwakho ukuthi kushicilelwe kumasayithi angahambisani, agcwele izikhangiso namanye ama-backlinks, noma ikhwalithi ejwayelekile ephansi. Ufuna inkampani yakho ihlotshaniswe nokufaneleka okuphezulu kakhulu namasayithi ekhwalithi - yamukela okuhle kuphela.
Noma uvumela okuqukethwe, qhubeka ukwenze sebenzisa i-Open Site Explorer ukuhlaziya ama-backlink amasha. Kwesinye isikhathi abeluleki be-SEO bazothumela okuqukethwe okuvunyiwe endaweni eyodwa, kepha baqhubeke nokukhokhela noma babeke amanye ama-backlink kwenye indawo. Uma kubukeka kungajwayelekile, kungenzeka ukuthi kunjalo. Futhi uma izixhumanisi eziningi zibukeka zingajwayelekile, kungenzeka ukuthi usebenza ngokukhohlisa kwe-SEO.
Kungenzeka ukwandise ngokushesha izinga lesiza sakho ngokwemvelo. Ukulungiselela isiza samanje nepulatifomu isinyathelo sokuqala, bese ukusikhuthaza ngokulandelayo. Sithanda ukusebenzisa amafemu asemthethweni obudlelwano bomphakathi ngobudlelwano obuhle nabezindaba ukwenza izindaba egameni lamakhasimende ethu. Asihlali sithola i-backlink… kepha noma singayitholi, sifinyelela izithameli ezifanele. Siphinde sisebenzise iphepha elimhlophe, i-ebook, imicimbi kanye ne-infographics ukuthola ukunakwa okuthile. Uma unokuthile okufanele ukuxhumane nakho, abantu bazoxhumanisa nakho.
Uqinisekile ukuthi ukhombe ukukopela, yini elandelayo?
Ingabe isisebenzi? Ukususa izixhumanisi ezimbi akuvamile ukwenzeka, kepha ungabacela ukuthi bazame. Bazise ukuthi akwamukeleki futhi kubeka yonke inkampani engcupheni. Gwema ukuvuza abasebenzi bakho ngamazinga angcono noma ivolumu. Esikhundleni salokho, ubavuze ukuthola ukubalulwa okuhle kumasayithi afanele kakhulu.
Ingabe ngumxhumanisi we-SEO? Babase.
Ingabe imbangi? I-Google Search Console empeleni inefomu lokubika eliya ku thumela isizinda esithenga ama-backlinks kanye nesayithi noma insiza uyazi ukuthi basebenza nayo ukuyithola.
Ukungazi akusona isivikelo uma kukhulunywa ngokukopela ukuthola isikhundla se-SEO. Ukukhokhela ama-backlinks kungukwephula imigomo yesevisi yakwa-Google futhi kuzokwenza isayithi lakho lingcwatshwe, noma ngabe ubwazi noma cha. Bhala okuqukethwe okuhle, okufanele njalo futhi uzoba nokuqukethwe okuheha ukusesha okuphilayo. Ungakhathazeki noma ulingeke ukuba ukhohlise ukugxila ezingeni lezinto eziphilayo… Gxila kokuqukethwe okuhle futhi uzozibona usezingeni elingcono futhi elingcono.
Inothi lokugcina kulokhu. Bengihlala ngisebenza ngamasu wokuxhumanisa emuva ngaso sonke isikhathi. Ngabe ngake ngakhokhela ama-backlinks kimi noma ngamakhasimende ami? Yebo. Kepha selokhu ngathola ukuthi ezinye izindlela zokuphromotha zivame ukuholela okukhulu imiphumela… hhayi nje ekuvakasheni, kepha ngokuxakile ku isikhundla kanjalo! Ngisahlaziya isikhundla samakhasimende ethu futhi ngibuyekeza ama-backlinks awo kaningi. Ngokuhlaziya ama-backlinks abo nad namasayithi abathola ukukhuluma ngawo, ngivame ukuthola izinsiza ezinhle ezingabhala ngamakhasimende ami. Imvamisa ngihlinzeka lezi zinhloso enkampanini yethu yezobudlelwano bomphakathi futhi bafaka izindaba ezimnandi lapho.
Tags: ukuxhuma emuvaama-backlinksukusebenzisa ngokugcwele injiniseoukuxhumana okuyi-backlinking
Lokhu okuthunyelwe okufika ngesikhathi kimi. Bengilokhu ngiskena okuthunyelwe kwi-freelance site guru.com futhi kuyethusa impela inani lamasayithi afuna lelo bump elikhulu asezingeni njengamanje ngamakhulu ambalwa nje. Lokho kuzokwenzeka kanjani, siyazibuza, ngaphandle kwama-backlink akhokhelwayo, nezinye izindlela ezingekho emthethweni?
Njengoba usikisela, i-PR yindlela eqinile yokuphakamisa iphrofayli yewebhusayithi yokusesha kanye nethuba lokukhipha umyalezo wakho kabanzi. Ukwenza okuqukethwe nesayithi lakho kuhlelwe nakho kubalulekile. Yize kuyathakazelisa ukubona ukuthi imithombo yezokuxhumana iyiphazamisa kanjani ngempela i-equation simo, ngoba ungathola izivakashi ezibandakanyeke kakhulu kusayithi lakho nge-SM enhle, futhi izinga le-Google kungathatha isikhashana ukuthola ukuthi wena afanele. I-SEO akufanele ibhekwe endaweni engenalutho.
Kunezici ezingaphezu kwezingama-22 ezibalulekile kuwe Isikhundla, futhi zingafana namasu we-8/10 SPAM, ama-autopost, izixhumanisi, izixhumanisi ezikhokhelwayo, ukuvimba…
Okubaluleke kakhulu isici somuntu, into iNombolo eyodwa OKUQUKETHWE.
AbakwaGoogle ababeki izivakashi kuphela, bakala isikhathi abasichitha kusayithi lakho, isikhathi esiningi sisho okuqukethwe kwekhwalithi, bathole imininingwane abayifunayo, babuye futhi… ..
Angiyona i-blogger enhle noma umthengisi ophumelelayo, ngiyaqala kepha angicabangi ukuthi izixhumanisi ezikhokhelwayo zisebenza ngaphezu kokuqukethwe kwekhwalithi
amakhasi amasha ashisayo esihloko kanye nomncintiswano wakho ongaqeqeshiwe.
Konke okunye kuyindlela yokucwaninga okubhekiswe kuwe, igama elingukhiye… I-Google yinhlangano evulekile okudingeka uyazi ukuthi ungazihlanganisa kanjani izinto futhi ungakuthola konke